ILAY TONDRO AVARATRA HAFA KELY – Blaogin'i Voniary
ILAY TONDRO AVARATRA HAFA KELY
Kapiteny Jack Sparrow dia jiolahin-tsambo kapiteny iray tena nikoizana tany amin’ny faritr’i Caraibes. Etsy ankilany, lalain’ny tantsambo eo ambany fahefany izy satria mahita mialoha ireny toerana misy harena miafina ireny na an-dranomasina izany na amin’ny nosy kely lavitr’andriana. Etsy andaniny indray, matahotra azy avokoa na ny mpivarotra na ny olon-tsotra mpivezivezy an-dranomasina, eny hatramin’ny tafika aza mipararetra raha vao mahare ny anarany fotsiny. Manana tondro avaratra hafa kely izay izy. Tsizarizary ny endriny ivelany ary raha jerena amin’ny maso tsy miangatra dia efa miala aina tanteraka ilay izy. Kapiteny Jack Sparrow anefa tsy mety misaraka amin’io fitaovany io mihitsy sady tsy mitsahatra manara-maso azy. Inona ary no mampiavaka io tondro avaratra io?
Mandeha tsy misy tanjona mazava
Tao anatin’ny volana vitsivitsy dia nahatsiaro very ireo tantsambo namany satria toa mihodinkodina fotsiny ny sambo, ny kapiteny Jack Sparrow toa tsy mahafantatra tsara izay aleha. Isaky ny mijery ilay tondro avaratra manko izy dia mihodinkodina tsy ankijanona io ka tsy ahafantarana izay tena marina. Nimenomenona ny rehetra ary nanery azy hanary io fitaovany io. Tsy nanaiky anefa ny anao lahy. Simba ve ilay fitaovany hoy ianao? Tsia! Izao ny tsiambaratelon’io tondro avaratr’i Jack Sparrow io, tsy manondro ny avaratra ilay izy fa manondro ny làlana mankany amin’izay zavatra na olona tena irinao indrindra. Izay no nampahomby ny Kapiteny Jack Sparrow hatramin’izay. Tamin’ity indray mitoraka ity anefa tsy vitan’ny hoe nisy vehivavy nampikorontana ny sainy (Elizabeth Swan) fa nihamafy koa ny fanaovan’ny tafi-panjakana haza lambo azy. Eo koa anefa ny fatahorany ilay fahavalony iray mahery aoka izany (David Jones) sy ny fikatsahany harena sarobidy iray izay tsy azony veroka akory ny misy azy. Vokatr’izany rehetra izany, nisavorovoro be ihany ny sainy ka tsy fantany izay tena tiany ahatongavana: ho any amin’i Elizabeth, vehivavy andrian’ny fony sa hitsoaka ny tafika sa hilefa lavitra an’i David Jones sa hitady harena sarobidy. Izany no antony nampihodinkodina fotsiny ilay tondro avaratra.
Ny lesona azo tsoahina
Mety ihatra amiko sy ianao io zavatra nanjo an’i Kapiteny Jack Sparrow io. Raha tsy misy tanjona mazava ianao dia zary olon-koazy, tsy mahita izay aleha ary tsy tonga n’aiza n’aiza. Fony fantatr’ity jiolahin-tsambo ity manko izay iriny indrindra, avy hatrany dia manondro izay làlana ahatongavana amin’izany ilay tondro avaratra. Izany no nahitany ny ny harena miafina isan-karazany indrindra ilay vola aman-karena miafin’i Cortèz. Eo amin’ny fiainana, anisan’ny fototry ny toe-tsaina mpandresy ny fananana tanjona mazava. Rehefa mamaritra tarigetram-piainana mazava ianao dia ho fantatrao na hatoro anao ny làlana izorana ho amin’izany. Azonao tsinjaraina isan-tsokajiny avy eo iny tarigetra iny ho tanjona ara-kasa, tanjona ara-pahaizana, tanjona ara-tokatrano, tanjona ara-pialamboly sy ny maro hafa. Tsy àry ho tratranao ao anatin’ny indray mitoraka koa anefa ireo fa mandeha tsikelikely. Ezaho ary ny mametraka tanjona isan’ambaratonga toy ireny miakatra amin’ny tohatra ireny. Mampahomby koa ny fahaizana mandamina ny tanjona ara-potoana: tanjona ho an’ny anio, tanjona ho an’ny herinandro, tanjona ho an’ny volana, tanjona ho an’ny taona eny hatramin’ny tanjona lavitra ezaka aza.
Raha efa nametraka tanjona ianao hatrizay dia tohizo hatrany ny làlanao. Raha tsy nahazatra anao kosa izany dia izao no fotoana tsara andinihanao ny fiainanao ka hamaritanao tanjona. Fantaro ary ny tanjonao!
fampivelarana ny maha-olona, kapiteny jack sparrow, manana tanjona, Pirates des caraibes, toe-tsaina mpandresy, tondro avaratr'i Jack Sparrow
Fano RAZAFIMAMONJIRAIBE : Sarotra ny manangana orinasa ka ilàna fahavononana
FANTATRO NY TANJOKO